Dhammaan duulimaadyadii waa la joojiyay, dekadihii waa la xiray iyadoo Shanghai ay u xirmayso Typhoon Chanthu
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Shiinaha » Dhammaan duulimaadyadii waa la joojiyay, dekadihii waa la xiray iyadoo Shanghai ay u xirmayso Typhoon Chanthu
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Shiinaha • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Safarka Tareenka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Dhammaan duullimaadyada waxaa lagu baajin doonaa gagida caalamiga ah ee Shanghai Pudong International Airport wixii ka dambeeya 11 -ka subaxnimo ee Isniinta sababtuna waa cimilada, halka dhammaan duullimaadyada madaarka Hongqiao ee galbeedka magaalada sidoo kale la joojin doono wixii ka dambeeya 3 -da duhurnimo isla maalintaas, sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen Maamulka Madaarka Shanghai. Habeenkii Axadda.
Hawlgalada kontaynarrada ayaa laga joojiyay dekedda Shanghai.
Dhammaan duulimaadyadii ayaa la joojiyay gegida diyaaradaha ee Pudong International ee Shanghai.
Duufaanta Chanthu ayaa la filayaa inay ku dhufato Shanghai habeenka Isniinta.
Bayaan ay soo saartay maanta, Kooxda Caalamiga ah ee Shanghai ayaa ku dhawaaqday in dekadda konteenarka ee Shanghai ay hakisay howlihii la xiriira konteenarka, iyadoo Typhoon Chanthu la filayo inay ku soo dhacdo dhinaca koonfureed ee magaalada habeenka Isniinta.
Ningbo Meidong Container Terminal Co. ee gobolka dariska la ah ee Zhejiang ayaa joojiyay qaar ka mid ah hawlihii konteenarka laga bilaabo Jimcaha, shirkadda ayaa ku sheegtay akoonkeeda wechat shalay.
Hawlgallada maraakiibta waaweyn ee dekedda Zhoushan ee gobolka - oo ay ku yaallaan qaar ka mid ah haamaha kaydka saliidda ee ugu weyn Shiinaha iyo kuwa wax soo sifeeya - ayaa la joojiyay tan iyo galabnimadii Sabtida.
Xiritaanka dekadu waxay u badan tahay inay dib u dhigto shixnadaha oo ay dhaawacdo silsiladaha sahayda ee caalamiga ah, kuwaas oo durba la halgamaya sidii wax looga qaban lahaa dhoofinta dhoofinta ee Shiinaha iyo saamaynta dillaaca COVID-19 ee maxalliga ah.
Sidoo kale, dhammaan duullimaadyada waa la joojin doonaa Shanghai Madaarka Caalamiga ah ee Pudong wixii ka dambeeya 11am Isniinta sababtoo ah cimilada, halka dhammaan duullimaadyada maraya garoonka Hongqiao ee galbeedka magaalada ayaa sidoo kale la baabi'in doonaa wixii ka dambeeya 3 -da duhurnimo isla maalintaas, sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay Maamulka Madaarka Shanghai habeenimadii Axadda.
Shanghai dawladdu waxay ku dhawaaqday inay sidoo kale xireyso dhammaan xannaanooyinka iyo dugsiyada hoose galabnimada Isniinta iyo Talaadada, halka qaar ka mid ah khadadka tareenka dhulka hoostiisa la joojiyay iyo jardiinooyinka iyo goobaha kale ee dalxiiska ee bannaanka la xiray Isniinta iyo Talaadada.
Gobolka Zhejiang ayaa sare u qaaday gurmadka deg -degga ah ee Chanthu ilaa heerkii ugu sarreeyay Axaddii, isaga oo xiray iskuulladii sidoo kale joojiyay adeegyadii hawada iyo tareenka ee dhowr magaalo, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Xinhua. Masuuliyiinta ayaa sidoo kale hakiyay qaar ka mid ah adeegyada tareenka xawaaraha sare leh ee Wabiga Yangtze Delta.